2022 Phd Ederede na Usoro nkuzi
Center on African Philanthropy and Social Investment ga-abanye a Usoro PhD na nkuzi ederede nke ga-eme site na Mọnde, 29 Ọgọst – Fraịdee, 02 Septemba 2022 na Mpumalanga, South Africa.
Ọmụmụ ihe a bụ maka ụmụ akwụkwọ PhD debanyere aha na mahadum ọ bụla dị n'Africa bụ ndị na-achọ nkuzi iji kwado nchọpụta agụmakwụkwọ na mmepe ide ihe. Ụmụ akwụkwọ ga-enwe ohere ịbụ ndị ọkachamara sitere na Wits Business School, nke bụ otu n'ime ụlọ akwụkwọ azụmahịa na-eduga na Africa.
Site na ịga ogbako a, ụmụ akwụkwọ ga-enweta ihe ọmụma na uru ndị a:
Ịkwalite nkà ịde akwụkwọ agụmakwụkwọ
Ịhazi na ịmepụta otu isiakwụkwọ
Ịzụlite ajụjụ nyocha na usoro echiche
Na-ede nkwupụta nsogbu
Na-eduzi nyocha akwụkwọ
Ịzụlite usoro nyocha - ọnụọgụ na qualitative
Nkụzi onye ọ bụla na nyocha nyocha nke onwe ya
Echiche ziri ezi na ịkwado maka mkpochapụ ụkpụrụ omume
Ịde maka akwụkwọ akụkọ agụmakwụkwọ
A chọrọ ka ị nyefee akwụkwọ ndị a:
Akwụkwọ ozi mkpali na-egosi ka ogbako a ga-esi baara gị uru
Ihe akaebe nke ndebanye aha sitere na mahadum gị
Akwụkwọ ozi nkwado sitere n'aka onye nlekọta gị
Atụmatụ nyocha gị ugbu a ma ọ bụ akwụkwọ edemede
A ga-edobe akwụkwọ anamachọihe niile site na email Mmabatho Leeuw ọ dịghị mgbe e mesịrị 08 Julaị 2022 n'elekere 14:00 nke ụtụtụ South Africa.
Ndị na-achọ akwụkwọ ga-aga nke ọma kwesịrị ịkwado ịnọ n'ebe ahụ maka oge ogbako ahụ zuru oke.
Enwere ohere scholarships iji kpuchie mmefu. Ndị ga-aga nke ọma ga-achọ itinye akwụkwọ maka ego n'aka ndị nhazi.
Ụbọchị ọmụmụ: Mọnde, Ọgọst 29 - Fraịde, Septemba 02, 2022
Ebe: Wits Rural Facility, Acornhoek, Mpumalanga
Ihe kpuchie: Ụgbọ njem si Wits Business School, nri niile, ebe obibi na Wi-Fi enweghị mkpuchi
Ihe anaghị ekpuchi: Buga ụlọ akwụkwọ azụmahịa Wits site na ọnọdụ gị
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ gbasara ogbako a, biko email Mmabatho Leeuw na Thandi Makhubele.
Ị ga-achọ ịhazi njem nke gị na Wits Business School na Johannesburg iji nweta ụgbọ njem nke ga-akpọrọ gị gaa Wits Rural Facility na Mpumalanga.
A ga-atụle ụmụ akwụkwọ PhD debanyere aha na ngalaba ndị a: Ụmụ mmadụ (akụkọ ihe mere eme, asụsụ, akwụkwọ, na nkà ihe ọmụma), Sayensị mmekọrịta ọha (Anthropology, agụmakwụkwọ, ọdịdị ala, iwu, sayensị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, akparamaagwa, sociology, mmepe na mmekọrịta mba ụwa), na Business (Akụkọ, akụ na ụba, ego, njikwa, na ahịa).
Ọmụmụ ihe gbasara ọdịmma mmadụ gụnyere itinye ego na-elekọta mmadụ
A ga-atụle usoro ngwakọ ebe ndị dabere na mpụga South Africa nwere ike isonye na ịntanetị.